‘मधेसी जनताले सरकारको माग गरेको होइन, अधिकारको माग गरेको हो’ « Nagarik Khabar
प्रकाशित मिति : 30 March, 2021 4:17 pm
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसी जनताले अहिले पनि अधिकार नपाएको बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लवको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले मधेसी जनताले सरकार होइन अधिकार माग गरेको बताए । ठाकुरले भने, ‘के मधेसमा पनि प्रजातन्त्र छ ? मधेसी-थारुलाई पनि प्रजातन्त्रको अनुभव छ ? किन अझै मधेसी-थारु जेलमा छन् ? उनीहरूले सरकारको माग गरेको होइन, अधिकारको माग गरेको हो ।’
वर्तमान संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गरिँदा नै मधेसमाथि अन्याय भएको बताए । आन्दोलनको एजेन्डाअनुसार मस्यौदा नआएको उनको भनाइ थियो ।
‘त्यसले हाम्रो चित्त बुझेको थिएन र हामी विरोधमा गएका थियौं,’ उनले भने, ‘खुद अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर मधेस स्वायत्त प्रदेश बन्ने छ र अन्य जातजातिको पनि स्वायत्त प्रदेश हुने छन् भनिएको थियो । तर, संविधानमा त्यो भएन ।’
त्यस्तै, अंगिकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि रहेको बताए । ‘नागरिकता मधेसको मात्रै होइन, सिंगै देशको समस्या हो । अंगिकृत नागरिकहरूले अहिलेसम्म किन वंशजको नागरिकता पाइरहेका छैनन् ?’
उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने ठाकुरको माग थियो । उनले मधेसी जनतालाई प्रजातन्त्रको अनुभव नै हुन नसकेको उनको भनाई छ । संविधान संसोधन मधेसीको मात्रै नभएर सबै पीडितको कुरा भएको उनको भनाई छ ।